जाडोयाम मन पर्छ, पहिरन गर्मीको : मेलिना मैनाली - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Home जीवनशैली जाडोयाम मन पर्छ, पहिरन गर्मीको : मेलिना मैनाली
काठमाडौं । पछिल्लो पुस्ताकी गायिका हुन्, मेलिना मैनाली । उनले स्वर दिएका ‘छोटो छ जिन्दगी’, ‘फिक्का फिक्का’, ‘इतिहास’, ‘सम्झेर एक्लै’ लगायतका गीतलाई स्रोता-दर्शकले रुचाएका छन् । दुई साताअघि सार्वजनिक भएको मोहितवंश आचार्यसँग उनले गाएको ‘हाम्रो माया यसरी चल्नदेऊ’ गीत पनि रुचाइएको छ ।
सांगीतिक क्षेत्रमा उदाउँदै गरेकी मेलिनाको दिनचर्या कसरी बित्छ ? उनको जीवनशैली कस्तो छ ? भन्ने विषयमा अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी ।
बिहान कति बजे उठनुहुन्छ ? उठ्ने समय सधैं एउटै हुन्छ कि फरक ?
पहिल्यैदेखि बिहान म अलि ढिलो उठछु । बिहानपख एकदमै मीठो निद्रा लागिरहेको हुन्छ, त्यसैले चाँडो आँखा खुल्दैन । उठ्दा प्रायः ८ बज्छ ।
ओछ्यानमै मोबाइल चलाउने बानी कत्तिको छ ?
खासै छैन ।
उठिसकेपछि सर्वप्रथम के गर्नुहुन्छ ?
पहिले फ्रेस हुन्छ । त्यसपछि तातो पानी पिउँछु अनि ‘ब्ल्याक टी’ पिउँछु । त्यसपछि हार्मोनियम अगाडि लिएर रियाज गर्न बस्छु । कहिलेकाहीं भने मुख नै नधोई पनि रियाज गरिरहेकी हुन्छु ।
बिहान ब्रेकफाष्ट लिनुहुन्न ?
लिँदिन । केही खाएँ भने खाना नै रुच्दैन ।
रियाज कति समय गर्नुहुन्छ ?
आफूले सिकेका कुरा ‘रिभिजन’ गर्ने हो । यति नै समय भन्ने छैन । कहिले आधा घण्टा हुन्छ, कहिले ४५ मिनेट ।
खाना कतिबेला खानुहुन्छ ?
९ देखि ९:३० बजेभित्र ।
खाना कसले बनाउनुहुन्छ ? खानामा के-के हुन्छ ?
यहाँ दिदी पनि छे । बिहान प्रायः उसले नै बनाउँछे । खानामा भात, दाल, तरकारी र अचार हुन्छ । मलाई खानामा चर्को, पिरो चाहिन्छ । मलाई दही एकदमै मनपर्ने भएकाले प्रायः छुट्दैन ।
बाहिर कतिबेला निस्किनुहुन्छ ?
खाना खाएपछि म संगीत कक्षा जान्छु । एक महिनाजति भयो, गुरु चण्डीप्रसाद काफ्ले सरसँग संगीत कक्षा शुरु गरेकी छु । १० बजे संगीत कक्षाका लागि हिँडछु । १०:४५ देखि १ घण्टा कक्षा हुन्छ ।
बाहिर निस्किनुअघि तयारी हुन कति समय लाग्छ ?
संगीत कक्षा मात्रै जाँदा धेरै तयारी गर्दिन । तर, त्यहाँबाट अन्यन्त्र कतै जानु छ भने तयारी हुन अलि समय लाग्छ ।
कपडामा कत्तिको सौखिन हुनुहुन्छ ?
एकदमै सौखिन छु । कपडा किन्न एकदमै मन पर्छ । आज सपिङ गर्ने भनेर चाहिं म हिँड्दिन । कतै जाँदा केही नयाँ कपडा देखें र मन पर्‍यो भने किन्न मन लागिहाल्छ, किनिहाल्छु पनि । ४/५ दिनमा एउटा न एउटा कपडा किनिरहेकी हुन्छु ।
कपडाको ब्राण्ड कत्तिको हेर्नुहुन्छ ? कस्तो रंगको कपडा बढी मनपर्छ ?
ब्राण्डेड नै चाहिन्छ भन्ने छैन । कपडाको क्वालिटी चाहिं किन्दाखेरि हेर्छु । कत्तिको टिक्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्छु । मलाई कालो, रातो बढी सुहाएजस्तो लाग्छ । त्यो रंगको कपडा बढी मनपर्छ । यद्यपि अरु जुनसुकै रंगका कपडाहरु पनि सुहाएको छ भने प्रयोग गर्छु ।
यात्रा गर्दा केमा गर्नुहुन्छ ?
आफ्नो सवारी साधन छैन । स्कुटर चलाउन आएपनि काठमाडौंमा कुदाउन डर लाग्ने रहेछ । यहाँ कतिपय गन्तव्य बाटोमै पनि हुँदैन, भित्रसम्म गाडी पुग्दैन । सोही कारण पठाओ, ट्याक्सीमा यात्रा गर्न सहज लाग्छ । त्यसमै बढी यात्रा गरिरहेकी हुन्छु ।
बाहिरी खानेकुरामा कत्तिको सौखिन हुनुहुन्छ ?
मलाई बाहिरभन्दा पनि आफैंले घरमै बनाएको मीठो लाग्छ । बाहिर खानुप¥यो भने म चिकेन आइटम बढी खान्छु ।
घरमा हुँदा प्रायःजसो के खाजा खानुहुन्छ ?
छिटो र सजिलो चाउचाउ हुन्छ । घरमा हुँदा प्रायः चाउचाउ बनाएर खान्छु । कहिलेकाहीं चटपटे बनाएर खाइरहेकी हुन्छु ।
दिन कसरी बित्छ ?
रेकर्डिङ, छायांकन र स्टेजमा नै बढी समय बितिरहेको हुन्छ । काम भएन भने संगीत कक्षाबाट आएर एकछिन आराम गर्ने, फेसबुक तथा टिकटक चलाउने÷बनाउने, युट्युब हेर्ने गर्छु । फुर्सदमा नयाँ नेपाली चलचित्रहरु पनि हेरिरहेकी हुन्छु । कहिलेकाहीं सुतेरै पनि दिन बितेको पत्तै हुँदैन ।
गायनबाहेक अरू रुचि के छन् ?
डान्स गर्न रुचि लाग्छ । अभिनय गर्न पनि मन पर्छ । अरुकोमा भन्दा पनि आफूले गाएको गीतमा सुहाउँछ भने अभिनय गर्न राजी नै हुन्छु । त्यस्तै, घुम्न मन पर्छ । तर, घुम्नकै लागि खासै हिँडेकी छैन । सुटिङ, स्टेजकै क्रममा धेरै ठाउँ घुमिसकेकी छु ।
आफ्नो कुन स्वभाव राम्रो लाग्छ ?
आफ्नो स्वभाव कसरी थाहा हुन्छ र ? म फ्र्यांक छु, सबैसँग बोल्छु ।
आफ्नो कुनै बानी सुधार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ?
म बढी रिसाउँछु कि जस्तो लाग्छ । केही काम गर्नुअगाडि यो त हुँदैन होला भन्ने सोच आइरहन्छ । कामलाई लिएर अलि डराउने, चिन्ता लिने खालको स्वभाव छ । यी कुराहरु सुधार्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
सांगीतिक क्षेत्रमा नजिकका साथीहरु कति छन् ?
धेरै नै हुनुहुन्छ । जस्तो, रचना रिमाल । ऊसँग एकदमै नजिक छु । एलिना दिदी हुनुभयो, समीक्षा भयो ।
जाडो मौसम बढी मन पर्छ कि गर्मी ?
लुगाहरु मलाई गर्मीको एकदमै मनपर्छ । गर्मीको लुगा एकदमै राम्रो-राम्रो हुन्छ । तर, जाडोमा ज्याकेट लगाएपछि अरु लुगा केही देखिँदैन ।
तर, सिजन चाहिं जाडो मनपर्छ । जाडोमा कुल भइन्छ । पसिना आउँदैन । काम गर्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ । सुटिङ प¥यो भने अहिलेको समयमा एकदमै रमाइलो, सहज महसुस हुन्छ । जाडो सिजनमा घुम्न पनि छुट्टै रमाइलो हुन्छ ।
दिनमा औसतमा कति रुपैयाँ खर्च हुन्छ ?
ठ्याक्कै यति भन्ने नै हुँदैन । कहिलेकाहीं धेरै सामान किन्दा १०/१५ हजार पनि खर्च भइरहेको हुन्छ । कहिले संगीत कक्षा जाने आउने खर्च मात्रै पनि भइरहेको हुन्छ ।
सबैभन्दा बढी खर्च केमा गर्नुहुन्छ ?
कपडामा हो । भनिसकें नि, राम्रो देखेका कपडाहरु किन्न मन लाग्छ ।
साँझ घर कतिबेला फर्किनुहुन्छ ?
प्रायः ६-७ बजेतरि फर्किन्छु । कहिलेकाहीं ढिलोसम्म काम हुँदा ९-१० पनि बज्छ ।
खाना कतिबेला खानुहुन्छ ? साँझमा आफैं बनाउनुहुन्छ कि ?
८-९ बजे । साँझ म छिटो आएँ भने आफैं बनाउँछु ।
सुत्नुअघि दिनभरका कामलाई कत्तिको सम्झिनुहुन्छ, सुत्दा कति बज्छ ?
सम्झिन्न । बरु भोलि के गर्नेहोला ? त्यो सोच्छु । खाना खाएपछि एकछिन मोबाइल चलाउँछु । फेसबुक, म्यासेज, टिकटक हेर्छु । नयाँ गीत कुन-कुन आयो युट्युबमा हेर्छु । वा आफ्नो गीत कस्तो भइरहेको छ हेर्छु । अनि बल्ल सुत्छु । सुत्दा प्रायः १० बज्छ ।
Previous articleसुनको मूल्य तोलामा ७ सय रुपैयाँले बढ्यो
Next articleहिंसा लुकाउँदा पीडकलाई उन्मुक्ति
कोठाभित्र आगो ताप्दा यी कुरामा ख्याल गरौं
चिकित्सकको सुझाव : कान पाक्ने समस्या जटिल बन्न सक्छ, हेलचेक्र्याइँ नगरौं
लक्ष्मीको जीवनशैली : मेकअप गरेर नहिँड्ने, ड्रेसअपमा औसत